Lesona 9: Fisedrana, fahoriana, lisitra
Hodinihina mandritra ny herinandro : Ezra 1:9-11; Dan. 1:1,2; Ezra 2; Ezra 8:1-15; Deo. 30:1-6; Neh. 11:1,2,
Tsianjery : "Dia samy nikambana tsara tamin'ny andriandahy rahalahiny, ka niozona sy nianiana hanaraka ny lalàn'Andriamanitra, izay nampilazaina an'i Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, ary hitandrina sy hankatò ny didy rehetra izay nataon'i Jehovah Tompontsika mbamin'ny fitsipika sy ny lalàny" . - Neh. 10:30.
Catégorie : Lesona 9: Fisedrana, fahoriana, lisitra
Matetika no dinganintsika fotsiny ireo filazana firazanana sy ireo fitanisan-javatra lavabe ao amin'ny Baiboly. Nampiditra ireo lisitra ireo tao noho ny antony iray anefa Andriamanitra. Misy lanjany Aminy avokoa ny tsipirian-javatra rehetra. Koa manome toky antsika izany fa mahatsiaro antsika mandrakariva Izy.
Asehon'ireo filazana firazanana vitsivitsy ireo fa fantatr'Andriamanitra avokoa izay rehetra mahakasika ny ankohonantsika. Ambaran'ireo fitanisan-javatra maro samihafa kosa fa heveriny tokoa na dia ireo zavatra izay mety horaisin'ny olona ho tsy manan-danja firy aza. Nilaza i Jesôsy fa miahy ny tsintsina Andriamanitra ary mahisa ny volon-dohantsika mihitsy aza. "Tsy eranambatry va no vidin'ny tsintsina dimy? Nefa tsy misy hadinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo" - Lio. 12:6,7. Ilay Andriamanitra izay mihevitra ny momba ny tsintsina dia mihevitra ny momba antsika koa, ary fantany na dia ny tsipirian'ny zavatra rehetra mampahory antsika aza.
Koa afaka matoky tanteraka an'Andriamanitra isika fa mihevitra ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika Izy. Mampahery izany, saingy tokony hilaza koa fa ilaintsika ny mihevitra bebe kokoa ny momba ireo lafim-piainantsika rehetra.
Ilay Andriamanitry ny tantara (Ezra 1:9-11)
Vakio ny Ezra 1:9-11 sy ny Dan. 1:1,2. Ahoana no anampian'ny andininy ao amin'ny Daniela antsika hahatakatra ireo andininy ao amin'ny Ezra?
Tantara mitovy no resahin'i Ezra sy i Daniela ao amin'ireo andininy ireo, saingy tsy mitovy ny fomba filazan'izy ireo izany. Manome ny lisitr'ireo zavatra nalain'ny Babilônianina avy tao amin'ny tempoly i Ezra. Rehefa ampitahaintsika amin'ny Dan. 1:1,2 anefa izay voalazan'i Ezra, dia hitantsika fa i Daniela kosa maneho ny sary ankapobenin'ny zavatra nitranga. Rehefa ampiarahina anefa ireo andalan-teny ireo, dia asehon'ireo fa mifehy ny toe-javatra rehetra mitranga amin'ny olona eto an-tany Andriamanitra.
"Fianarana ho antsika ankehitriny ny tantaram-pirenena. Nanokana anjara toerana ho an'ny firenena tsirairay, ho an'ny olona tsirairay eo amin'ny plana midadasika nataony Andriamanitra. Ary amin'izao androntsika izao dia hozahan-toetra ny olona rehetra sy ny firenena rehetra, ka hafdtra amin'ny famarana eo an-tanan'Ilay tsy mety ho voafitaka. Hametra izay ho anjarany amin'ny alalan'ny safidy ataon'ny tenany ny olona sy ny firenena rehetra, ary hitantana ny zava-drehetra Andriamanitra ho fanatanterahana ny fikasany" - MM, t. 438.
Vakio ny Dan. 5. Inona no ampianarin'io foko io antsika momba ny mpanjaka Belsazara? Nahoana no nitsara azy Andriamanitra?
Lavo i Babilôna tamin'ny 539 TLK, rehefa resin'i Kyrosy, mpanjakan'ny tafika medo-persianina, izy. Nobaboin'i Kyrosy tamin'ny fotoana tsy nampoizina izany tanana izany. Inona no nataon'i Belsazara, mpanjakan'i Babilôna, tamin'ny afina nakan'i Kyrosy an'i Babilôna? Nikarakara lanonambe feno hadalana izy. Nandritra io lanonambe io dia nisy tanana avy any an-danitra nanoratra teo amin'ny rindrin'ny lapany. Nampitandrina azy ny teny voasoratra fa ho faty tsy ho ela intsony izy. Fantatr'i Belsazara tsara anefa ny tantaran'ny mpanjaka Nebokadnezara. Feno avonavona ny fon'io mpanjaka io ka nataon'Andriamanitra tonga tahaka ny biby izy, izany hoe nihinana ahitra nandritra ny fito taona. Rehefa tapitra io fotoana io, dia nohavaozin'Andriamanitra ny sain'i Nebokadnezara mpanjaka, ka natolony ho an'Andriamanitra ny fony. Fampitandremana lehibe io tantara io saingy tsy mba nandray lesona avy tamin'izany i Belsazara. Zava-doza mandrakariva ny tsy mihaino ny fampitandremana avy amin'Andriamanitra sy ny tsy manaraka ny toromarika omeny.
Nohazavain'i Daniela ny soratra teo amin'ny rindrina, saingy efa tratra aoriana loatra ka tsy avotra intsony i Belsazara. Nanao safidy ratsy izy, ka izany safidiny izany no nahatonga azy ho faty.
Rehefa avy nilaza ny tantaran'i Nebokadnezara tamin'i Belsazara i Daniela, dia hoy izy: "Ary hianao, ry Belsazara zanany, dia tsy mba nampietry ny fonao, na dia fantatrao aza izany rehetra izany" - Dan. 5:22. Ahoana no ahazoantsika antoka fa tsy mamerina ny hadisoana nataon'i Belsazara isika? Manampy antsika hanana fanetren-tena mandrakariva eo anatrehan'Andriannanitra ny fijerena ny hazo fijaliana. Amin'ny fomba ahoana?
Aiza ny Mpisorona? (Ezra 8:1-15)
Araka ny hitantsika omaly, dia fahatanterahana faminaniana tamin'ny fomba mahagaga no nampody ny Jiosy avy tany Babilôna ho amin'ny taniny indray.
Mazava loatra fa nisy ny olana. Nanome teny fikasana mahafinaritra ho an'ny Jiosy tokoa mantsy Andriamanitra, izay nampanantena fa hanampy azy ireo hanorina indray ny tananany Izy. Jiosy maro anefa no tsy nety niverina an-tanindrazany. Naleony nijanona tao Babilôna, ary io no fray tamin'ireo olana goavana nisy.
Vakio ny Ezra 8:1-15. Mifantoha amin'ny fomba manokana eo amin'ny and. 5. Inona no olana goavana atrehin'ny olona eto?
Araka ny efa nolazaintsika, tsy ny Jiosy rehetra babo tany Babilôna no nety niverina tany Jerosalema, ary anisan'izany ny Levita. Misy antony maro mety nahatonga izany. Maro tamin'izy ireo no teraka tany Babilôna. Tao no nanokanany ny fiainany fray manontolo ka i Babilôna no tanana tokana fantatr'izy ireo. Koa maro tamin'ireo Jiosy no tsy to hanao dia lavitra sy mampidi-doza mba hiverenana any amin'ny tany izay tsy mbola fantatr'izy ireo mihitsy. Nanana olana hafa koa ireo Jiosy niverina tany Jerosalema: sahirana izy ireo nitady Levita hiara-miverina aminy mba hikarakara ny tempoly. Hianarantsika misimisy kokoa ny momba izany amin'ny Alakamisy.
"Hatreto dia nonina tany Babilôna efa ho dimampolo amby zato taona ireo Jiosy izay nijanona tany. Fantatra fa nisy mpanankarena jiosy maro nonina tany Nippur nandritra ny fanapahan'i Artaksersesy Voalohany. Noho izany, ampoizina fa tena sarotra ho an'i Ezra sy ireo mpiara-mitarika taminy ny nandresy lahatra ireo mpanankarena ireo handao an'i Babilôna ka hiverina any Jerosalema. Tsy afaka ny hanampo afa-tsy fiainana sarotra tokoa mantsy ireo vondron'olona niverina tany Jerosalema. Koa mora kokoa ny nijanona tany Babilôna satria nilamina kokoa ny fiainana tany. Raha jerena ireo rehetra ireo, dia ho fahagagana ny mahita fa nahavita nandresy lahatra fianakaviana efa saika ho roa arivo i Ezra mba hiara-miverina aminy any Jerosalema" — SDABC, b. 3, t. 376.
"Tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra" - Asa. 14:22. Inona no ambaran'izany amintsika momba ny fisian'ny fisedrana sy ny zava-tsarotra tsy maintsy hatrehin'ireo izay maniry ny hanompo an'Andriamanitra amim-pahatokiana?
Manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra (Deo. 30:1-6)
Vakio ny Deo. 30:1-6. Inona no teny fikasana omen'Andriamanitra ny vahoaka hebreo ao amin'ireo andininy ireo? Araka ny hevitrao, Inona no tsy maintsy ho hevitr'io teny fikasana io ho an'i lehilahy tahaka an'i Ezra sy i Nehemia?
Fantatr'i Ezra sy i Nehemia tsara ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny olony. Fantatr'izy ireo fa hitondra ny olona hiverina avy any amin'ny fahababoana any Babilôna Izy. Hitantsika tao amin'ny Neh. 9 fa takatry ny olona tsara koa ny tantarany sy ny anton'ny olana mianjady arniny. Etsy ankilany, fantatr'izy ireo koa ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitarihany, na dia eo aza ny fahotany.
Koa natoky an'i Jehôvah ny olona fa hampahomby ny fiverenan'izy ireo avy amin'ny fahababoana Izy. Tsy midika anefa ireo teny fikasana ireo fa tsy hiatrika olana izy ireo eny amin'ny lalany eny.
Vakio ny Ezra 8:16-23. Inona no fihaikana hita ao amin'ireo andininy ireo? Ahoana no niatrehan'ny olona izany?
Fantatr'i Ezra fa na eo aza ireo teny fikasana, dia hisy loza maro tsy maintsy hosedraina eny an-dalam-podiana. Koa nanatona an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadian-kanina ary ny fanetren-tena izy. Tamin'izany fomba izany no nanekeny fa tena miankina amin'Andriamanitra ny fahombiazan'izy ireo. Tamin'io fotoana io, noho ireo loza maro teo anoloana, dia tonga tao an-tsain'i Ezra ihany ny eritreritra hangataka fanampiana sy fiarovana tamin'ny mpanjakan'i Persia. Tamin'ny farany anefa dia nifidy ny tsy hanao izany izy, tsy tahaka an'i Nehemia (Neh. 2:9) izay nanana mpanaraka mba hanatitra azy. Angamba nahatsapa i Ezra fa raha manao izany izy, dia hanala baraka an'Andriamanitra. Efa nilaza tamin'ny mpanjaka tokoa mantsy izy hoe: "Ny tanan' Andria-manitray mahasoa izay rehetra mitady Azy; fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy Azy" - Ezra 8:22. Nizotra tsara avokoa ny zava-drehetra, satria taty aoriana izy dia nanoratra (Ezra 8:31) fa niaro azy ireo ny Tompo ka tonga soa aman-tsara tany amin'ny taniny izy ireo.
Mazava loatra fa tsy maintsy matoky an'Andriamanitra isika eo amin'ny zavatra rehetra. Eo andanin'izany, oviana isika no tokony hangataka fanampiana na dia amin'ireo tsy mpino aza? Nahoana anefa no matetika indrindra izany no zavatra tokony hatao?
Ao amin'ny tanàna masina (Neh. 11:1,2)
Vakio ny Neh. 11:1,2. Inona no mitranga ao amin'ireo andininy ireo? Nahoana ny olona no tsy maintsy nanao filokana mba hahitana izay honina ao Jerosalema, sy any amin'ny tanana hafa?
Inona no ampianarin'ny Neh. 11 antsika? Nila nanapa-kevitra ny vahoaka ny amin'izay honina ao Jerosalema.
Hita fa mora kokoa ny fiainana any ambanivohitra noho ny any an-tanan-dehibe. Tany ambanivohitra dia samy nanana ny taniny izay nolovainy tamin'ny razany ny olona. Tsy maintsy nahafoy izany taniny izany anefa izy ireo raha toa ka honina any an-tanan-dehibe, any Jerosalema. Koa vitsy ihany ny olona naniry ny hanao izany.
Manao ahoana ny fihaikana atrehina rehefa mifindra any amin'ny tanana na firenena vaovao mba hampiely ny filazantsara ianao? Tsy maintsy vonona ny hiatrika fanandramana vaovao sy zava-tsarotra maro ianao raha hanao izany.
"Tsy mitory ny filazantsara araka ny tokony ho izy ny mpiasantsika. Mila mifoha ireo mpitarika antsika ka hijery ny asa mila vitaina. Mandinika ireo tanana izay tsy nanaovantsika afa-tsy asa kely aho. Olona an'arivony maro no monina any amin'ireny tanana ireny, ary tsy maintsy ampitandremana izy ireo fa ho avy tsy ho ela i JesOsy. Rehefa mandinika izany aho, dia mahatsapa faniriana lalina ny hahita lehilahy sy vehivavy handeha hiasa amin'ny herin'ny Fanahy, sy vonton'ny fitiavan'i Kristy ny fanahy very izay mila Mpamonjy" — TFC, b. 7, t. 40.
Jereo ny lisitra lavabe mitanisa ny anaran'ireo mpisorona sy Levita ao amin'ny Neh. 12:1-26. Araka ny hevitrao, nahoana no nampidirina tao izany lisitra izany? Inona no fifandraisana misy eo amin'ireo olona ireo sy ny fitokanana ny mandan'i Jerosalema izay voasoritsoritra ao amin'ny Neh. 12:27- 47?
Tian'Andriamanitra hotanterahina araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Mila olona vonona ny hanompo Azy amin'ny fony rehetra aloha Izy, izay vao afaka mampiasa ireo olona ireo hamita zavatra goavana. Nanampy an'i Nehemia nanorina ny manda ireo fianakavian'ny mpisorona ireo mba hahafahan'izy ireo miankohoka am-pilaminana eo anoloan'ilay Andriamanitra velona, ao an-tempoly. Zava-dehibe ny manda satria miaro ny olona izany. Tsy ampy anefa ny manda mafy manodidina ny tempoly, fa mila mpisorona feno fanoloran-tena koa izany. Raha tsy misy mpisorona, dia tsy hisy fiankohofana marina ao an-tempoly. Noho izany, samy nanana andraikitra hotanterahina teo amin'ny asany avy ny vahoakan'Andriamanitra.
"Porofon'ny maha-kristiana", TH, tt. 67-78.
"Misy olona izay efa nahalala ny fitiavan'i Kristy hamela heloka sady mba naniry marina tokoa ho tonga zanak'Andriamanitra; nefa tsaroany fa tsy mendrika ny fitondrantenany. Be tsiny ny toe-piainany, ka dia misalasala izy, na efa nohavaozin'ny Fanahy Masina ny fony, na tsia.
"Amin'ny olona toy ireny, dia hoy aho hoe: Aza mihemotra amin'ny famoizam-po. Tsy maintsy hihohoka sy hitomany matetika eo an-tongotr'i Jesôsy isika noho ny tsy fahombiazana sy ny fahadisoana; nefa tsy tokony ho kivy isika. Ary na dia hoe resin'ny devoly aza isika dia tsy ariana, na afoy, na lavin'Andriamanitra akory. Sanatria! Eo an-tanana ankavanan 'Andriamanitra Kristy manao fifonana ho antsika. (...) Maniry anao ho tafaverina ao Aminy Izy mba hahitany ny fahadiovany sy ny fahamasinan'ny tenany mitaratra eo aminao. Ary raha mety manolotra ny tenanao ho Azy ianao, dia Izy Izay nanomboka asa tsara tao anatinao no hampandroso izany asa tsara izany ho amin'ny andron'i Jesôsy Kristy. Mivavaha amin-kafanam-po bebe kokoa ary minoa amim-pahatokiana misimisy kokoa. Rehefa tonga tsy matoky ny herin'ny tenantsika isika, dia aoka hatoky ny herin'ny Mpanavotra antsika ary dia hidera Azy, dia Izy Izay azontsika ianteherana"- TH, tt. 76,77.
1. Hitantsika ao amin'ny Dan. 2 fa nanambara mialoha ny hoavy i Daniela, efa ho arivo taona maro lasa izay. Nambarany tsara mialoha ny fitsanganan'ireo ampira nifandimby sy ny nahalavoan'izy ireo. Nosoritsoritiny tsara mihitsy koa aza ny fisaratsarahan'i Eorepa ankehitriny. Ahoana no anomezan'io faminanian'i Daniela io fankaherezana sy fanantenana ho antsika? Tena tsy mandeha araka ny tokony ho izy tokoa ny fiainana indraindray, saingy ahoana no anehoan'ny Dan. 2 amintsika fa fantatr'Andriamanitra avokoa ny zava-drehetra ary efa nambarany mialoha mihitsy aza izany? Ahoana no anampian'izany fahalalana izany anao hatoky mandrakariva fa mifehy ny zava-drehetra Izy?
2. Fantatr'Andriamanitra avokoa izay rehetra momba antsika. Mampahery antsika izany ary manome toky antsika to miahy antsika Izy (vakio ny Isa. 43:1). Ahoana no ahafahanao manome toky ny hafa ihany koa fa tia azy sy miaraka aminy koa Andriamanitra, no dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza?
3. Hitantsika tao amin'ny lesona Alarobia to tsy nety nitady fanampiana tamin'ny mpanjaka i Ezra. Inona no natahorany fa hoheverin'ny mpanjaka raha toa ka nanao izany izy? Andeha handinika ny valin'io fanontaniana io amin'ny fijerena ohatra iray hafa isika. Fantatsika to manasifrana Andriamanitra. Koa midika ve izany to maneho tsy fahampiam-pinoana isika raha too ka manatona mpitsabo? lfanakalozy hevitra ao amin'ny kilasy io hevitra io.
Any amin'ny tananany (Ezra 2)
Vakio ny lisitra ao amin'ny Ezra 2 sy Neh. 7. Inona no hitanao ao amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo?
Omena ao amin'ny Ezra 2 ny lisitr'ireo olona niverina avy tany Babilôna, izay notarihin'i Zerobabela sy i Josoa. Averina ao amin'ny Neh. 7 indray io lisitra io, ary misy antony izany. Averina indray fa toa mety hanorisory antsika io lisitra io, saingy maneho teboka manan-danja izany, dia ny fiheveran'Andriamanitra ny tsipiriany izay mety tsy manan-danja amintsika akory.
Efa vita ny fanorenana ny mandan'i Jerosalema tamin'io fotoana io. Koa tian'ny Baiboly haseho tsara amintsika fa niara-niasa avokoa ireo vondron'olona voalohany niverina avy tany amin'ny fahababoana mba hanorina ny manda. Avy tamin'Andriamanitra anefa ny fahombiazan'izy ireo. Nanampy tamin'ny famitana ny asa natombok'ilay vondron'olona voalohany ny vondron'olona vaovao tafaverina tao Jerosalema. Niara-niasa avokoa izy rehetra. Sarotra ny asa, feno sakantsakana, ary tsy vita haingana araka izay nieritreretan'izy ireo azy. Niasa hatrany anefa izy ireo mandra-pahavitan'ny manda.
Nomen-danja ny fitarihan'i Ezra sy i Nehemia, saingy nanao ny anjarany koa ny vahoaka. Nampirisika hatrany ny olona hiasa mafy sy tsy hilavo lefona izy ireo. Maneho zavatra hafa amintsika koa ireo lisitra ao amin'ny Ezra 2 sy Neh. 7. Hitantsika amin'izany fa fiandohan'ny asa ao amin'ny Ezra 2 dia mifandray amin'ny fiafaran'ny asa ao amin'ny Neh. 7. Tsy hoe vita fotsiny ny tempoly faharoa nony farany, fa voaorin'ny olona indray koa ny tananan'i Jerosalema.
Vakio ny Neh. 7:73. Inona no ampianarin'izany antsika momba ny fahombiazan'ny olona teo amin'ny faniriany hanao ny sitrapon'Andriamanitra?
"Ary samy tafapetraka teny an-tananany avy (...) ny Isiraely rehetra" - Neh. 7:73.
Asehon'io andininy io fa nampahomby ny asan'ny olona Andriamanitra. Vita ny asa fanorenana indray ny tempoly, ka afaka mody avokoa izy rehetra ankehitriny.
Amin'ny lafiny maro dia mahatalanjona ny fiverenan'ny Isiraely avy tany amin'ny fahababoana sy ny asa fanorenany indray ny tanana sy ny tempoly. Taona maro talohan'izao mantsy dia nalain'ny Babiloniana ho babo ny Jiosy. Rava ny tempoliny, ary rava tahaka izany koa ny tananany. Tafaverina anefa izy ireo izao ka niverina n.anorina indray ny tananany sy ny tempoliny. Tsy maintsy ho fahagagana tokoa izany ho azy ireo sy ho an'ireo manodidina. Nitranga araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teny fikasany avokoa anefa ny zavatra rehetra.